फेरी नक्कली अभियुक्त, निर्मलाको आत्ममाथी ‘बलात्कार’ गर्दै सरकार ! – On Khabar
अभियुक्त प्रदीप र विशालको पनि मिलेन डिएनए रिपोर्ट
पुस ३ , काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्तनगर–२ कि १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको हत्या अनुसन्धानमा प्रक्राउ परेका पछिल्ला अभियुक्त प्रदीप रावल र विशाल चौधरी समेत नक्कली रहेको उनीहरुको डिएनए नमिलेपछि पुष्टि भएको छ । बलात्कारपछी हत्या भएकी निर्मला पन्तको आत्मले अझै शान्तिको महसुस त गर्न पाएन नै उनको आत्मलाई समेत नक्कली अभियुक्त देखाउँदै पटकपटक सरकारले नै बलात्कार गरेको छ । अनुसन्धानमा क्रममा पक्राउ परेका प्रदीप रावल र विशाल चौधरीको डीएनए नमिलेको पाइएको छ । स्रोतका अनुसार निर्मलाको शरीरबाट निकालिएको ‘स्वाब’सँग उनीहरुको डीएनए नमिलेको हो । केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो ९सिआइबी० को टोलीले प्रदीपलाई मंसिर २० मै काठमाडौंमा पक्राउ गरेको थियो भने विशाललाई मंसिर २१ मा कञ्चनपुरबाट काठमाडौं ल्याइएको थियो ।
स्रोतका अनुसार मंगलबार र वा बुधबारसम्म जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कञ्चनपुरमा प्रदीप र विशालको डीएनए रिपोर्ट खोल्ने तयारी छ । निर्मला हत्या अनुसन्धानका क्रममा हालसम्म कञ्चनपुरका तत्कालीन एसपी दिल्लीराज विष्टसहित १० जना बढीको डीएनए परीक्षण गरिएको थियो ।पछिल्लो समय ‘भेजिनल स्वाब’ संकलन प्रक्रिया नै गलत त थिएन भन्ने प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । सरकारका लागि निकै दबाबको घटनाको रुपमा आएको निर्मला हत्याकाण्ड झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरका एसपी कुवेरसिंह कडायतले डीएनए प्रोफाइल रिपोर्ट शिलबन्दी गरेर ल्याउन कञ्चनपुरबाट काठमाडौं एक प्रहरी पठाइएको जानकारी दिए । ‘‘रिपोर्टमा के छ भन्ने सरकारी वकिलको कार्यालयमा खोलिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ । रिपोर्ट कार्यालय समयमै आइपुगे मंगलबार नभए बुधबारसम्म सरकारी वकिलको कार्यालयमा पेश गर्छौं ।’’ प्रदीपको डीएनए प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशाला र नास्टमा परीक्षण गरिएको थियो ।
प्रहरीसँगको बयानमा भने प्रदीप र विशालले निर्मलाको हत्या आफैंले गरेको ‘स्वीकार’ गरेका थिए । उनीहरुले सामूहिक रुपमा बलात्कारपछि निर्मलाको हत्या गरेको दाबी गरेको प्रहरी स्रोतले जनाएको थियो । ‘‘डीएनए बाहेक अनुसन्धानका कैयौं विधि र पाटा हुन्छन् । हामी सबै पक्षबारे सचेत र सतर्क छौं,’’ एक प्रहरी अधिकारीले भने । डीएनए म्याच नभएको अवस्थामा प्रदीप र विशाल छुट्छन् त भन्ने बाह्रखरीको जवाफमा सिआइबीका प्रमुख डिआइजी निरज शाहीले भने, ‘‘डीएनए रिपोर्टको बारेमा केही आएको छैन । पहिले नतिजा कुरौं । सरकारी वकिल लगायतको धारणा के रहन्छ । बाँकी कदम त्यसपछि चाल्छौं ।’’ स्रोतका अनुसार प्रदीप र विशालको ‘पोलिग्राफ’ परीक्षण पनि गर्ने प्रहरी तयारी छ ।निर्मला हत्याकाण्डको अनुसन्धानमा क्रममा प्रहरीले अझै केही व्यक्तिलाई निगरानीमा राखिरहेको छ । अनुसन्धानमा रहेको प्रहरी टोलीसँग हत्यारासँग पुग्न चित्तबुझ्दो प्रमाण फेला परेको छैन ।
अनखबर पुस ६, दाङ दाङमा विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा २२ जनाको मृत्यु भएको छ भने १५ जना घाइते भएका छन् । घटनास्थलमा ामा २१ जनाको शव फेला परेको छ भने अस्पतालमा एकजनाको मृत्यु भएको छ । घटनास्थल बाट ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख एवं डिएसपी प्रेमबहादुर शाहीले २१ जनाको शब घटनास्थलमा फेला पारेको जानकारी […]
नाममात्रको कम्युनिष्ट सरकार पूर्ण रुपले असफल भयो : नेता पुन
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बझाङकाे अायाेजनामा पुस ५ गते बुङलकाे बिचगडामा बिशाल जनसभा सम्पन्न भएको छ । पार्टीको संगठन सुदृढीकरण तथा बिस्तार अभियान अन्तरगत सम्पन्न भएको जनसभालाई पार्टिका पाेलिट ब्युरो सदस्य अाेम प्रकाश पुनले संबाेधन गरेका थिए । देश अहिले इतिहासमै राष्ट्रियता , जनतन्त्र र जनजिबिकाकाे क्षेत्रमा निकै संकटमा परेकाे कुरामा जाेड दिदै नेता पुनले अहिलेकाे […]
सरकारी कर्मचारी होसियार, विप्लवको कारबाहीमा परिएला ! अनखबर संवाददाता पुस ८, मुगु मुगु : मुगुमा सरकारी योजनामा अनियमितता गर्दै आएका महेष कठायतलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आइतबार कालोमोसो दलेर कारबाही गरेको छ । अहिले पनि हरेक योजनाको १० प्रतिशतको दरले असुल्दै आएको थाहा पाएपछि निजमाथि सदरमुकाम गमगढीमा कालोमोसो दलि जनकारबाही गरेको नेकपाले जनाएको छ । मुगुमा छाँयानाथ […]